Douglas Karr ao amin'ny Edge of the Web Radio | Martech Zone
Nahafinaritra niaraka tamin'ny namana Erin Sparks Sisitry ny Web radio (misoratra anarana amin'ny iTunes) amin'ity sabotsy farany ity. Niresaka momba ny infografika vitsivitsy izahay, valin'ny karoka facebook, paikady atiny ary media sosialy. Erin sy ny ekipany dia mamokatra ny seho isa-kerinandro ary mipetraka any Indianapolis. Azonao atao koa henoy mivantana amin'ny alàlan'ny WXNT pejy an-trano.
Raha tsy nanana fotoana hihainoana ilay fizarana ianao - ity ny ampahany voalohany. Zahao ny fizarana sisa amin'ny misoratra anarana amin'ny Edge of the Web Youtube Channel.
Tags: sisin'ny tranonkalaerin sparkMarketing Infographicsonjam-peo
Ny fahazoana ny olonao amin'ny valin'ny fikarohana
Ahoana ny fomba hahitana ireo style CSS tsy ampiasaina amin'ny Stylesheet-nao